Kulan gaar ah oo ay yeesheen Galaha Amaanka ee Qaramada Midoobay Oo qaraar ka soo baxay - Latest News Updates
Kulan gaar ah oo ay yeesheen Galaha Amaanka ee Qaramada Midoobay Oo qaraar ka soo baxay
Kulan gaar ah oo ay yeesheen Galaha Amaanka ee Qaramada Midoobay maalintii ay bisha May ku beegnayd 31ka ayaa waxa ka soo baxay qaraar kaasoo ku taliyay In loo sameeyo Shirweyne saamayn ku yeelanayo geedi socodka nabadda iyo horumarka dalka
Soomaaliya..Kulankii shalay oo oo inteesa badan loo hadlay arimaha Amniga iyo cusboonaysiinta loo sameeynayo joogitaanka ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa waxa sidoo kale looga hadlay xaalada siyaasadeed ee ka sii dareysa ee ka jirta dalka Soomaaliya.
Madaama dowlada Fedaraalka ku guuldareysatay inay dalka isku hayso isla markaana xal loogu helo khilaafka faraha ka sii baxaya ee u dhaxeeya dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa Goalaha Amaanka soo saaray qaraar amar lagu siinayo dowlada Soomaaliya.
Qodobada ka soo baxay qaraarka waxa ka mid ah:
-In go’aanka qaybsiga Kheyraadka dalka laga gaaro go’aan wada jir ah isla markaana lagu qoro dastuurka dalka. Golaha Amaanka ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go’aanka uu qaatay baarlaamanka Soomaaliya ee ayan raaliga ka ahaynin dowlad goboleedyada.
-Maadamaa Dowlada Dhexe ku fashilantay in ay dalka isku hayso, Golaha Amaanka waxa uu qaraar ku soo saaray in la sameeyo gole dowladeed kaas oo macnihiisu yahay in la sameeyo Madasha Wadatashiga Qaran (Somali National Leadership Forum) kaas oo ay ku jiraan dhamaan dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlada dhexe. Xubnaha ka tirsan Golaha Wadatashiga iyaga oo wada siman ayay go’aan ka gaarayaan ayaaha dalka, gaar ahaan Arimaha Amaanka, Doorashada, Kheyraadka dalka.
-In la cadeeyo hogaanka, doorka iyo mas’uuliydaa hay’adaha ka mas’uulka ah arimaha amniga
Goalaha amaanka ayaa markii ay soo saarayeen qaraarkaan waxa ay cuskadeen cutubka 7 ee dastuurka Qaramada Midoobay oo sheegaya in Qaramada Midoobay ay u aragtay in ay muhim tahay in ay talaabo ka qaadaaan xaaalada ka jirta Soomaaliya taas oo khatar ku ah nabadda isla markaana ay lama huraan tahay in Golaha Amaanka go’aan cad ka qaato arimaha Soomaaliya. Golaha Amaanka ayaa dareemaya in ka jirta dalka Soomaaliya khatar keeni karta in dowladnimada Soomaliya lunto.
Qaraarka (resolution) ka soo baxay Golaha Amaanka ma aha warmurtiyeed iyo warbixin laakiin waa amar la siinayo madaxda dowlada Soomaaliya oo lagu amrayo inay fuliyaan qodobada kor ku xusan.